» मेयर महतको प्रश्न–६२ देखी ६४ बर्षकालाई मात्रै कोरोना लागेको हो ?
मेयर महतको प्रश्न–६२ देखी ६४ बर्षकालाई मात्रै कोरोना लागेको हो ?
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १७:१३
हेटौंडा – हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरि बहादुर महतले आजबाट नगरवासीलाई लगाईने भनिएको कोभिड–१९ बिरुद्धको भेरोसेल खोप आफ्ना कारण रोकिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ती जनाएका छन् । प्रहर खबरसंग टेलिफोनमा कुरागर्दै मेयर महतले आफ्ना सम्पुर्ण नगरबासीलाई एकैपटक कोरोना बिरुद्धको खोप लगाउन चाहेको र उक्त परिमाणको खोेप हाल उपलब्ध नभएका कारण स्थगित गर्न चाहेको बताए ।
बास्तविक कुरा नबुझि खोपको बिषयलाई अतिरञ्जित गरिएको र त्यस बिषयले आफुलाई केही फरक नपर्ने बताए । मेयर महतले ६२ देखी ६४ बर्ष उमेर समुहका नागरिकलाई मात्र कोराना भाइरस संक्रमण भएको हो ? भन्दै प्रश्नको प्रति प्रश्न गरे । यस बिषयलाई लिएर भोली पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्नो धारण प्रष्ट पार्ने उनले जानकारी दिए ।
मेयर महतले आज खोप नलगाईने भने पनि उपमेयर मिना कुमारी लामाले सम्पुर्ण वडाहरुमा खोप लगाउन भनेकी थिइन् । हेटौंडा नगरबासीका ६२ देखी ६४ बर्ष उमेर समुहका नागरिकका लागि २ हजार ७ सय डोज भेरोसेल खोप प्राप्त भएको थियो ।
मकवानपुरमा खुकुलो पारी एक साता थपियो निषेधाज्ञा, हेर्नुस यस्तो छ निर्णयहरु